Sinocare waxaa lagu abaalmariyay "Nooca Sanadka" ee 10aad ee Caafimaadka leh Abaalmarinta Shiinaha-News-Sinocare
Sinocare waxaa lagu abaalmariyay "Nooca Sanadka" ee 10aad ee Caafimaadka Shiinaha Abaalmarinta
Waqtiga: 2019-08-16 Hits: 250
Brand waa hanti aad u weyn oo aan la taaban karin oo loogu talagalay shirkadaha iyo sidoo kale sharafnimada iyo sumcadda soo ururtay sannado badan. Shirkad badanaa waxay la kulantaa tijaabooyin taxane ah waqtiga kahor intaysan noqon sumcad caan ah oo laga helo mid yar. Waa lagama maarmaan in shirkaduhu ay u adeegsadaan tayada si ay u abuuraan qiime, ku guuleystaan ​​kalsoonida si daacadnimo ah, u faafiyaan macnaha astaanta dhaqan ahaan, ayna ku gaaraan horumar muddo dheer leh ruuxa hal-abuurnimo.
Dhawaan, xafladdii sii-deynta ee abaalmarintii tobnaad ee Caafimaadka Shiinaha ee "Healthy China 2030 Brand Plan", oo ay iska kaashadeen Caafimaadka Warka Xafiiska, www.39.net, Awooda Maskaxda, ayaa lagu qabtay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. Gao Fu, oo ah agaasimaha Xarunta Shiinaha ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, madaxweyne ku-xigeenka Ururka Dhakhaatiirta Shiinaha iyo aqoonyahan ka tirsan Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska, iyo 9 qof oo kale ayaa ku guuleystay abaalmarinta "Qofka Sanadka", iyo 10 isbitaalada sida Peking Union Medical College Hospital ayaa la gudoonsiiyay "Isbitaalka Sanadka ee Caafimaadka Aadanaha". 27 shirkado dawooyin oo aad u wanaagsan, oo ay ku jiraan Sinocare, ayaa ku guulaystay "Magaca Sanadka", "Muwaadiniinta Ganacsiga Sanadlaha ah" iyo abaalmarino kale siday u kala horreeyaan.
Maaddaama waxqabadka xulashada aasaasiga ah ee "Qorshaha Sumadda Caafimaadka Shiinaha 2030", liiska abaalmarinta ugu dambeysa ee abaalmarinta tobnaad ee Caafimaadka Shiinaha lagu soo saaray habab badan, oo ay ku jiraan KPMGBaadhitaanka buuxa ee codbixinta, magacaabista xog badan, baaritaanka xun ee ra'yiga dadweynaha iyo xayeysiinta khadka tooska ah, qiimeynta bilowga ah ee khubarada, jawaab celinta dib u qiimeynta calaamadaha, qiimeynta ugu dambeysa ee khubarada, iyo xayeysiinta bulshada. "Nooca Sanadka", Sinocare wuxuu ka dhex muuqday boqolaal nooc. Tani waa sababta oo ah maahan oo kaliya inay bixiso xooggeeda gaarka ah ee "Shiinaha Caafimaadka leh", laakiin sidoo kale waxay ku dadaaleysaa sii deynta xoogga sumcadda Shiinaha.
ZHANG JIJIAO, MADAXWEYNE KU XIGEENKA MIDNIMADA MIDNIMO EE CAALAMIGA AH IYO CILMI-BADAN, AYAA SIIYAY AQOONSIGA CARRUURTA ABAAL-GALKA EE KU GUULEYSTA
Iyadoo lagu riyoonayo “in loo oggolaado dhammaan bukaannada sonkorowga ku jira ee Shiinaha inay leeyihiin mitirkooda gulukoosta dhiigooda”, Sinocare waxaa la aasaasay 2002, waxayna billawday safarka dhiirrigelinta alaabada kormeerka gulukoosta dhiigga ee la awoodi karo iyo horumarinta warshadaha maxalliga ah ee daryeelka sonkorowga ee Shiinaha. U hogaansanaanta qiimaha asaasiga ah ee "u hoggaansamida ballanqaadkeena iyo u heellanaanta Caafimaadka", Sinocare waxaa ka go'an hal-abuurnimada tiknoolajiyada biosensing, iyadoo ujeedkeedu yahay baaritaanka, horumarinta, soo saarista iyo iibinta taxane ah baaritaanno dhakhso leh oo loogu talagalay bukaannada qaba cudurrada daba dheeraaday iyo caafimaadka. xirfadlayaasha daryeelka.
Shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, oo leh astaamo "sax ah, fudeyd iyo dhaqaale", Sinocare mitirka gulukooska dhiiggu wuxuu ku guuleystey amaan badan oo macaamiisha Shiinaha ah. Ilaa imminka, alaabteennu waxay u sameysmeen dhowr taxane, oo ay ku jiraan taxanaha AQ ee taxanaha ah, taxanaha SAFE-ACCU, taxanaha dahabiga ah, laba-shaqeynta gulukooska dhiigga ee EA-11 & mitirka aaladda uric, Qalabka mitirka gulukooska dhiigga wareega iyo nidaamka la socodka gulukooska dhiigga. Shiinaha, in ka badan 50% dadka sonkorowga qaba ee is-kormeera cudurada waxay isticmaalaan waxyaabaha Sinocare.
Waqtiga horumarka joogtada ah ee shirkadeena, Sinocare ma iloobi doonto bilowga wadnaha waxayna si joogto ah ugu quudin doontaa bulshada waxayna fulin doontaa howlo sadaqo. Mudnaanta kaqeybgalka Sinocare ee howlaha samafalka bulshada waa in la faafiyo fikradda caafimaadka, la wanaajiyo wacyiga daryeelka caafimaadka dadka iyo ilaalinta caafimaadka dadka. Sidaa darteed, Sinocare waxay si firfircoon ugu fidayaan goobta adeegga caafimaadka ee sonkorowga, iyagoo abuuraya qaabka "qalabka + softiweerka + adeegga" iyo ka caawinta dadka qaba cudurka macaanka inay fahmaan oo ay bartaan maaraynta sonkorowga oo dhameystiran, si loogu dhaqaaqo hadafka ah "bedelida doorkeena ka soo caan baxa dhiigga mitirrada gulukooska ee khubarada maaraynta cudurka macaanka ”.
Bogga Hore: Sinocare waxay kaqeyb gashay 2018 Middle Medlab East Dubai
Bogga Dambe: None